Gịnị Bụ Ahịa akpaaka? Ihe You Kwesịrị Knowmara ... | Martech Zone
Gịnị Bụ Ahịa akpaaka? Ihe You Kwesịrị tomara…
Sunday, Eprel 3, 2016 Satọde, Febụwarị 13, 2021 Douglas Karr
Marketing akpaaka bụ okwu a na-ekwu na ọ bụ ihe a na-etinye n'ọrụ n'ihe niile n'oge a. Ọ bụrụ na ngwanrọ ngwanrọ nwere ike ịkpalite ozi nye onye nnata site na API ha, a na-akwalite ya akụrụngwa ahịa. N'uche m, nke a bụ emeghị ihe n'eziokwu. Ọ bụ ezie na nke a nwere ike ịbụ ọrụ akpaghị aka nke dabara na atụmatụ ahịa ha, ọ bụ ihe ngwọta akpaaka ahịa. N'ezie, ekwenyere m na imirikiti azịza akpaaka ahịa dịnụ - ọbụlagodi nke kachasị ukwuu - nwere oke ike na-egbochi ikike marketer iji ghọta oke uru nke ezigbo akpaaka ahịa.
Nkọwa: Akụrụngwa ire ahịa na-ezo aka na nyiwe ngwanrọ na teknụzụ e mere maka ngalaba na ụlọ ọrụ na-ere ahịa na-arụ ọrụ nke ọma na ọtụtụ ọwa n'ịntanetị (dị ka email, mgbasa ozi mmekọrịta, weebụsaịtị, wdg) na ịrụ ọrụ ugboro ugboro. Dị ka akọwapụtara na Wikipedia.
Nke a bụ nkọwa doro anya nke na-akwadoghị nkọwa ụlọ ọrụ ọ bụla ma ọ bụ iru eru ọ bụla.
Echere m na oge eruola na onye ọ bụla nọ na ụlọ ọrụ ahụ biliri wee rụọ ọrụ ka mma nke ịkọwapụta njirimara ndị bụ isi na mgbanwe dị mkpa iji chọpụta usoro gị dị ka ikpo okwu ahịa akpaaka. Anyị edeela n'ihu na Automation Marketing. Ọ bụghị naanị otu esi eme ya leverage ahịa akpaaka ma mgbanwe na ụlọ ọrụ dị ka dum. O di nwute, ulo oru na etinye ego na a ahịa akpaaka ngwọta ka na-ahu nsogbu.
Mmekọrịta Boston mepụtara ihe omuma a dị ka nnyocha nke isi azum leveraging ahịa akpaaka ugbu a.
Gịnị bụ uru nke Marketing akpaaka?
Dị ka InTouch CRM:
63% nke ụlọ ọrụ ndị na-eme karịa ndị na-asọmpi ha na-eji akpaaka ahịa
Ulo oru nke na-eji akpaaka ahia iji zulite olile anya na-enweta mmụba nke 451% na ndu ruru eru
75% nke ụlọ ọrụ na-eji akpaaka ahịa na-ahụ ROI n'ime otu afọ
Ihe Mere Mmepe Akụrụngwa Azụ ahịa Ji Ada
Atụmanya dị egwu nke akụ - industrylọ ọrụ na-ere ahịa ahịa ahịa niile na-arụ ọrụ dị oke egwu na ịtọbe atụmanya na ire ere nyiwe ha. Ha na-ekerịta ihe eji eme ihe na-aga nke ọma mgbe ejiri ha mee ihe, mana ndị ahịa ha na-asọ oyi. Ya mere, ndị ahịa na-etinye oge na ego na-enweghị isi n'elu ikpo okwu ha na-ejighi. Nke a bụ ihe m yiri: Na-ere ahịa akpaaka dị ka na-ere friji na onye agụụ na-agụ. Igwe nju oyi agaghị arụpụta ezigbo ihe belụsọ ma i juputara ya na nri!
Nnweta abụghị ihe niile - Fọrọ nke nta ka ọ bụla a maara nke ọma ahịa akpaaka n'elu ikpo okwu na-emekọ naanị na nnweta. Ọ na-emetụtawanye inwe usoro ịzụ ahịa ziri ezi nke na-arụ ọrụ na nnweta na njigide ma na-abawanye uru nke njikọta na ndị ahịa. N'ụzọ dị ịtụnanya, ụfọdụ n'ime nyiwe ndị kachasị ewu ewu n'ebe ahụ na-eleghara profaịlụ na ọrụ ndị ahịa gị anya - ha na-arụ ọrụ iji tụba atụmanya n'ime olulu ụzọ iji mee ka ha gbanwee.
Ndị ụlọ ọrụ anaghị enwe ọkaibe - Site n’oge ruo n’oge, anyị na-ele ka ụlọ ọrụ na-agbanwe site na ndị na-eweta ọrụ email na-enyefe ha n’aka ndị na-eweta akpaaka na-ere ahịa nke nwere nnukwu ọhụụ nke ịlaghachi azụ na itinye ego na ọkaibe. O di nwute, ha adighi njikere igbanwe usoro ha n'ime, ya mere ha na-eji usoro ihe eji eme ihe. Kedu mmefu ego!
Usoro Ahịa gị adabaghị - Isi okwu ọzọ dị na gambit nke usoro akpaaka azụmaahịa dị ebe ahụ bụ na ha mepụtara otu ụzọ-nha-niile dabara. Nweta akwụkwọ ikike maka nke ọ bụla n’ime ndị na-eweta ọrụ kachasị ukwuu na ha na-agwa gị ozugbo ka ị hapụ usoro gị na ịnya ụgbọ ala na ịzụlite ụzọ na, kama, gbanwee na “usoro” ha. Ha na-eme nke a n’amaghịdị ihe bụ ihe ịga nke ọma ma ọ bụ enweghị ihe ịga nke ọma na ahịa ahịa na usoro ahịa ya.
Otutu Nzọụkwụ iji gbanwee - Imirikiti nyiwe na-eji usoro akọwapụtara, ọtụtụ usoro site na mmata site na ntụgharị. Nke ahụ dị mma ma ọ bụrụ na ọ dabara na ụzọ ị na-atụ anya iji gbanwee, mana maka ọtụtụ azụmaahịa, ihe ndị na-eme n'etiti ịmara na ntụgharị dị iche. Need chọrọ ahịa ahịa akpaaka nke nwere ike dakọtara na usoro ma ọ bụ ihe omume nke ndị ahịa gị na-ewere… ọ nwere ike ịbụ 3 ma ọ bụ ọ nwere ike ịbụ 30!
Otutu uzo ka ntughari - Site na otu nha-uzo nile, enwere uzo-uzo nile. Ọ bụrụ na ijere ọrụ dị iche iche, ndị ahịa dị iche iche, azụmahịa dị iche iche, na ngwaahịa dị iche iche, ị ga-achọ mgbanwe imepe otutu uzo iji gbanwee na ihe omume, nurturing, email, ọdịda peeji nke, ịkpọ-na-omume na isi azum. Strapara n’otu ụzọ na - eme ka usoro nkwalite ngwa ahịa azụmaahịa gị nwee nsogbu ọfụma ma nwee ike tufue ego dị ịtụnanya ị na - eme.
Mgbanwe ụgwọ - Imirikiti ndị na-ere ahịa anyị maara na-arụ ọrụ obere ego karịa ka ha nwere na mbụ. Gbado usoro ịzụ ahịa akpaaka na-achọ ngalaba azụmaahịa ka ọ gaa n'ihu na-arụ ọrụ atụmatụ ahụ na-ebugharị nsonaazụ azụmaahịa ma na-emejuputa usoro ọhụụ ọhụụ. Ọtụtụ mgbe, nke a chọrọ ihe ndị ejikọtara ọnụ, nyocha nke ahịa na njigide, yana ọdịnaya ọdịnaya iji mepee peeji ọdịda, akwụkwọ ọcha, webinars, nbudata, na ozi ịntanetị dị mkpa iji mejupụta mkpọsa akpaaka ahịa ọhụrụ. Anyị na-ahụ ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ndị ahịa ọ bụla na-alụ ọgụ a… na-edebanye aha ha na ikpo okwu ma ghara itinye ya n'ọrụ ọtụtụ ọnwa n'ihi enweghị mgbanwe mgbanwe.
Ọ na-atụkarị m anya ịhụ ụlọ ọrụ ndị na-agbaso mgba nke usoro inbound iji wụkwasa na ngwa ngwa ngwa ahịa ngwa ngwa. Ha nwere ike ọ gaghị enwe mmemme email na-aga… ma ọ bụ na ha enweghị njikọta ndị ahịa (CRM), ma ọ bụ saịtị kachasị mma, ma ọ bụ saịtị kachasị maka ọchụchọ, mmekọrịta mmadụ na ntụgharị convers mana ugbu a ha na-achọ iji mejuputa azịza akpaaka ahịa. Na gịnị?!
Gịnị Na-eme Njizi Azụmaahịa Ahịa?
E nwere ọtụtụ atụmatụ nke ikpo okwu na-ere ahịa iji nweta ihe zuru oke ma gbasaa ka ị na-adịwanye nkọ na mkpa na-eto. Ka anyị tụlee ha ebe a:
Mbubata data - Ikike iji wepu data site na ịgba ụgwọ, nkwado, na sistemụ ndị ọzọ metụtara ndị ahịa kwesịrị. Okwesiri inwe ike ịbawanye, nkewa, ma wepụta mgbasa ozi akpaaka ahịa gị. Rụ ọrụ ụbọchị niile iji wepụ, ịhịa aka n'ahụ, na ibubata data ugboro ugboro abụghị akpaaka.
Mbupụ data - have nwere sistemụ ndị ọzọ, dị ka CRM, helpdesk, ngalaba ịgba ụgwọ, wdg. Chọrọ ịmara mgbe ihe omume ndị ahịa mere n'ime mkpọsa ahịa akpaaka gị. Ihe atụ nwere ike ịgụnye ịtọlite ​​ihe ncheta na-aga n'ihu na Salesforce, ma ọ bụ izipu nkwupụta na arịrịọ.
API - Yana ike izipu ma nata data, ihe API bụ ihe dị mkpa iji kpalite ihe omume na melite ozi na mgbasa ozi akpaaka ahịa gị.
Mgbasa Ozi Na-akpali - Ikike ịmalite mkpọsa site na omume omenala dị mkpa. Dịka ọmụmaatụ, mmadụ na-ebudata akwụkwọ akụkọ na-acha ọcha-ọ dị mkpa ka ị nwee ike ịme mkpọsa nke na-eme ka ọ bụrụ njedebe.
Drip mkpọsa - ignmekọrịta usoro nkwukọrịta maka onye ahịa gị n'ofe ndị na-ajụ ase nwere ike ime ka ha tinye aka ma kụziere ha ihe site na ntụgharị.
Ndu isi - Ọ bụrụ n’inwe ike ịhazi atụmatụ akara dabere na ọrụ onye ọrụ, ị nwere ike ịgwa ndị ahụ okwu nke ọma wee ghọta ebe ha nọ n’ịzụ ahịa, mmeghari ohuru, ma ọ bụ nkwalite usoro.
Nkesa na nzacha - Ikike nke ịkwanye ndị debanyere aha na na nke mkpọsa, nyocha ndị nnata, na ngalaba nke onyinye na ohere na-enye ọkwa dị elu nke nhazi nke ga-eme ka ịpị-pịa na ntụgharị.
Mmekọrịta Social Media - Ige ndị na-ege gị ntị ntị na ịkparịta ụka n'etiti gị na mgbasa ozi mmekọrịta gị dị mkpa. Omume mgbasa ozi ọha na eze nwere ike imezi usoro n'ihi na ọ na - enyere gị aka ijikọ ngwa ngwa ma mechie azụmahịa ngwa ngwa.
Itorchọta ndị ọbịa - ifyingchọpụta ndị ọbịa pụrụ iche site na adreesị IP, data ndị ahịa, ọrụ ụdị, ntinye, ịpị email, wdg. Nwere ike inyere ụlọ ọrụ gị aka nyocha, nkewa, nzacha, na ime mkpọsa ndị dị mkpa.
Msdị na Ibe ọdịda - ptchọta data na iwulite profaịlụ zuru ezu na meta data nwere ike inye gị ozi niile ịchọrọ iji mepụta mkpọsa ahaziri iche nke na-ezi ozi ziri ezi n'oge kwesịrị ekwesị.
email Marketing - N'ihi na ọ bụ na ntọala nke ọ bụla ahịa akpaaka usoro, nke a bụ kwesịrị… ma ọ dị mkpa na ị na-enwe ike chepụta na igbu mkpọsa ndị na-anabata maka mobile agụ. Itinye ederede ederede na oku ekwentị bụ gbakwunyere!
Ntughari, Ntughari, Ahapu - Arụ ọrụ gafee ọwa na akara gị na-enyere gị aka ịzigharị ozi ahaziri iche dabere na ebumnuche ndị ọrụ.
content Management - Ikike ịtinye ederede, ụdị, na ọbụlagodi itinye ọdịnaya dị ike bụ atụmatụ dị egwu maka sistemụ njikwa ọdịnaya gị. Gini mere iji akwalite onyinye ohuru mgbe onye ahia na eleta saiti gi… nye ha ozi ahaziri iche!
Unlimited, Mgbasa ozi ọwa - Otu ụzọ adịghị ezu. Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ụlọ ọrụ ọ bụla chọrọ ọ dịkarịa ala mmekọrịta atọ maka njide ndị na-eduga, na-eme ka ndị ahịa dị ọhụrụ, ma na-eme ka ndị ahịa ugbu a.
Enwere nnyocha ụfọdụ n'ebe ahụ kedu ka ndi n’ahia n’ahia ahia azurita uzo, ma ọ ga-adị mma ma ọ bụrụ na otu n'ime ndị na-eme nchọpụta dị ka Forrester ma ọ bụ Gartner kwurịtara okwu karịa, ọnụ ahịa ọkaibe, ụgwọ mmejuputa, yana akụrụngwa dị mkpa iji mejuputa ma mepụta ụdị ahịa nchekwa ego na-enweghị atụ. Ekwenyere m na ọtụtụ ụlọ ọrụ abụghị ndị na-akwadoghị maka mbọ achọrọ, ha anaghị aghọtakwa na ha ezughi oke iji nweta mmemme ndị a n'ala. Usoro ahia na-eme ihe ike na-akpaghị aka na-ere ahịa ahịa - mana enweghị akụrụngwa na njirimara na-egbochi ikike ha nwere ịbawanye oke.
Obi abụọ adịghị ya na ụlọ ọrụ ndị na-akwụ ụgwọ dị ukwuu maka ndị na-eweta ọrụ email na ha kwesịrị ileba anya na usoro akpaaka ahịa iji bulie arụmọrụ ha. Ha nwedịrị ike ịchekwa obere ego na-eme ụdị mkpọsa ahụ ma na-achịkọta data dị oke ọnụ maka mkpọsa n'ọdịnihu. Mana ọ dị oke mkpa na azụmaahịa mara ihe azụmaahịa azụmaahịa azụmaahịa kwesịrị imere ha yana akụrụngwa dị mkpa iji kwado ha ka ha nwekwuo azụmaahịa azụmaahịa ha.
Tags: ịgbahapụAPIịgba ụgwọCMSCRMobe-ọwanjikwa mmekọrịta ndị ahịadatantapu mkpọsaemail ọpụpụemail Marketingnyoformshelpdeskmbido peeji nkendu akaraakụrụngwa ahịaahia akpaaka atụmatụvidiyo akpaaka ahịana-emegharị ahụretargetingnkewaịzụ ahịa ịzụ ahịa gbahapụrụsupportazụmahịa azụmahịatriggered mkpọsakpaliri emailna-akparaghị ókènleta esenowoKedu ihe bụ akpaaka ahịa
Video di egwu. Enwere m ike ịjụ nke ngwanrọ ị ji mee ya?
Ndewo Ben! Amaghị nke ọma - bipụtara vidiyo izizi Ntuziaka Technology na YouTube!
N'ezie, Azụmaahịa Ahịa bụ ngwá ọrụ na ihe ngwọta dị ike na Lead Generation yana inweta atụmanya ndị nwere ike ịnweta ebe ọ bụ na mgbasa ozi ọha na eze na-ahụ ọtụtụ azụmahịa. Na B2B dị irè na itinye aka na azụmaahịa ndị ahụ site na e-mail. Nchịkọta na-enyekwa ezigbo mkpali iji hụ ka ị si eto ma dị irè ma ọ bụ na ọ rụghị. Na m qoute, “Ọ bụ ihe impactful inwe a echiche ahịa atụmatụ na-arụ ọrụ na nnweta na njigide mgbe ịba ụba uru nke njikọ aka na ndị ahịa.” Nke a bụ eziokwu. Njide ga-abụ ihe mgbaru ọsọ. Dị otú ahụ na-enye aka isiokwu.
Jul 4, 2016 na 9:00 PM
Daalụ!! M na-eti mkpu n’ụzọ nkịtị Daalụ! mgbe ị na-agụ nke a - mkpali!